200A USB Ngwa Manufacturers & Suppliers | China 200A USB Ngwa Factory
15Kv25Kv na-agba ọsọ
Anhuang ọkachamara na Class Bushing Extender, anyị na-enye ogo dị elu Class Bushing Extender. General ： 600A klas bushing extender ekwe echichi na ọkọlọtọ deergized 600A nwụrụ anwụ ezumike ihu maka njikọ mbenata mgbata plọg, ejikọta plọg na ngwa bushings. 200A Ibu okpukpu okpukpu maka ikpere aka ikpere na njikọta ikiaka. Mgbe a gbakọtara na ngwa mating, ọ na-enye ya kpamkpam submersible, n'ụzọ zuru ezu echebe unit. Ihe di n'ime: EPDM bushing extender Clearing Paper ...
Okwu Mmalite: 15kV 200A Ibu Ibu Igbaaka njikọta bụ a n'ụzọ zuru ezu-echebe ma na a gwara mmanụ ngwa mgbakwunye nchupu maka ejikọta n'okpuruala USB na-ekesa ike usoro nke na mpe mpe akwa-mound transformer, gburugburu ike ọkọnọ alaka igbe, USB alaka igbe onwem na ibu ezumike bushings. Njikọ ikiaka na ntinye ntinye gụnyere ihe ndị dị mkpa nke njikọ njikọta niile. Ọ nwere ike ịchọta mkpa nke ahịrị na nuklia. Ngwa ： Loadbreak ikiaka njikọ bụ a n'ụzọ zuru ezu echebe ma na ...
Anhuang ọkachamara na Bushing ọma, anyị na-enye elu mma Bushing ọma. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu Mmalite: 15kV / 24kV 200A Bushing Well a na-eji na elu-voltaji circuit nke na mpe mpe akwa, submersible transformer, mgba ọkụ Kwadobe, wdg A loadband bushing fanye eri n'ime a eluigwe na ala bushing ọma na-enye otu ọrụ dị ka ihe integral ibu agbaji bushing. The bushing eji ọnụ na USB ngwa dị ka: bushing wet, Rotatable F ...
Anhuang pụrụ iche na Bushing wet, anyị na-enye elu mma Bushing wet. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu Mmalite: 15kV 200A Bushing insert threads to a global bushing well to the same function as an integral load break bushing. Iji ntinye ntinye na-eme ka ntinye na ngbanwe dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Ihe ntinye na ntughari aka na-ebuli ihe dị mkpa nke njikọ njikọta niile. The bushing Insert na-eji patented ...
15kV 200A Ibu Igba ezumike ikiaka njikọ
Anhuang ọkachamara na Ibu Ibu Igbaaka njikọ, anyị na-enye elu mma Loadbreak ikiaka njikọ. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na TEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu mmeghe k 25kV 200A Load break Elbow Connector bu ihe nkwuputa ngwa mgbakwunye zuru oke ma kpuchie ya maka ijikọ eriri ala iji kesaa sistemụ ike nke pad-mound transformer, igbe igbe agbata ike nke gbara gburugburu, igbe alaka ulo oru ndi nwere uzo ezumike. Ikiaka njikọ na bushing fanye mejupụtara essentia ...
Anhuang ọkachamara na Loadbreak Elbow Connector, anyị na-enye ezigbo mma Loadbreak Elbow Connector. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu Mmalite: ikiaka njikọta bụ a n'ụzọ zuru ezu-echebe ma na-akparị nkwụnye nchupu maka njikọ n'okpuruala USB na-ekesa ike usoro nke na mpe mpe akwa-mound transformer, gburugburu ike ọkọnọ alaka igbe, cable alaka igbe onwem na ibu ezumike bushings. Njikọ ikiaka na ntinye ntinye na-etinye ihe dị mkpa nke loa niile ...
Anhuang ọkachamara na Rotatable Feedthru Insert, anyị na-enye nnukwu mma Rotatable Feedthru Insert. Ngwaahịa ahụ na-emezu ihe niile IEEE Standard 386 chọrọ ma na-agbanwe ya kpamkpam na ngwaahịa ndị asọmpi. 15kV 200A Rotatable feedthrough fanye eri n'ime uzo zuru uwa nke oma iji nye otu oru dika ihe ntinye ngwa ngwa. Iji ntinye ntinye na-eme ka ntinye na ngbanwe dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Bushing inserts na ikiaka njikọta mejupụtara t ...
Anhuang ọkachamara na Rotatable Feedthru Insert, anyị na-enye nnukwu mma Rotatable Feedthru Insert. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu Mmalite: 24kV 200A Rotatable feedthrough itinye na-eji na-enye sọrọ bushings si otu ngwa bushing ọma。 Ọ na-eme converting radial-ndepụta nkesa ka nri thru nkesa na-agbakwunye na-akara arrester nchedo ma mfe ma bara uru. Ya patented, wuru na-torque na ịmachi ratchet egbochi ọrụ si na mberede b ...
Anhuang pụrụ iche na Bushing wet, anyị na-enye elu mma Bushing wet. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC. Okwu Mmalite: 24kV 200A Bushing insert threads to a universal bushing well to the same function as an integral load break bushing. Iji ntinye ntinye na-eme ka ntinye na ngbanwe dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Ihe ntinye na ntughari aka na-ejikọ ihe dị mkpa nke njikọ njikọta niile. The bushing Insert na-eji patented w ...